मार्च 28, 2019 मार्च 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments एभोकाडो, फाइदाहरु
एभोकाडो (Avocado) लाई नेपालीमा घिउ फल (Butter Fruit) भनिन्छ । एभोकार्डो न्यानो हावापानीमा फल्ने एक प्रकारको फल हो । यसको वैज्ञानिक नाम पेर्से अमेरिकाना (Persea Americana) हो । सबैभन्दा बढी एभोकाडो उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा मेक्सिको पर्छ । समुन्द्र सतहबाट २५०० मिटरसम्म यसको खेती गर्न सकिन्छ । पर्याप्त मात्रामा स्वस्थ्यका लागि लाभदायक फ्याट र कार्बोहाइड्रेट हुने भएकाले एभोकाडो खानुका थुप्रै फाइदा छन् ।
विभिन्न अध्ययन मार्फत वैज्ञानिकहरुले यसमा अत्यन्तै फाइदाकारक तत्व हुने बताएका छन् । यो फल पाचन प्रणालीदेखि लिएर डिप्रेरसन र क्यान्सरका रोगीलाई समेत फाइदाजनक मानिन्छ । यो फलमा विभिन्न २० थरीका भिटामिन तथा खनिज पाइन्छ । एभोकार्डोले मोटोपन, मधुमेह, मुटुको रोग घटाउन पनि सहयोग गर्छ। यस फल खाँदा स्वास्थ्यलाई निम्न फाइदा हुन्छ।
१. अत्याधिक पोषक तत्वयुक्त फल
एभोकाडोमा २० वटा छुट्टाछुट्टै प्रकारका भिटामिन र मिनिरल पाइन्छन् । हाम्रा शरीरका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पोषक तत्वहरु एभोकाडोको सिङ्गो फलबाट पाउन सकिन्छ । यसका साथै यो फलमा कोलेस्ट्रोल नहुने भएकाले पनि यसलाई जो कोहीले सेवन गर्न सक्छ । एभोकार्डौको भित्री र बाहिरी भाग दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एउटा एभोकार्डौमा ६४ क्यालोरी हुन्छ । जसमा ६ ग्राम चिल्लो, ३.४ ग्राम कार्बोहाइडेट, एक ग्रामभन्दा कम चिनी र ३ ग्राम फाइवर हुन्छ । एभोकार्डोमा भिटामिन ‘सी, ई, के, बी’ पाइन्छ । राइवोप्लाविन, नियासिन, फोलेट, पयान्टोथेनिक एसिड, म्याग्नेसियम र पोटासियम पनि यो फलमा पाइन्छ । बिटाक्यारोटिन र ओमेगा–३ चिल्लो एसिड पनि यसमा पाइन्छ । एभोकार्डो पूर्ण रुपमा स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ। यसले रगतमा ग्लुकोजको मात्र नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।
२. उच्च रक्तचापलाई कम गराउँछ
पोटासियम एउटा यस्तो तत्व हो जसले शरीर भित्रका महत्वपूर्ण प्रणाली सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ । केरामा १० प्रतिशत पोटासियम हुन्छ भने एभोकाडोमा १४ प्रतिशत पोटासियम हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार अधिक पोटासियमले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत् गर्छ र हृदयघात अनि किड्नी फेल हुनबाट समेत बचाउँछ । एउटा एभोकार्डोमा २५ मिलिग्राम चिल्लो हुन्छ । यसलाई बेटा-सिस्टेरोल भनिन्छ । यसमा रहेको चिल्लो पदार्थ स्वस्थवर्धक मानिन्छ । एभोकार्डो नियमित खाएमा रगतमा भएको कोलस्ट्रोललाई सन्तुलन राख्न सहयोग पुग्छ।
३. फाइबरको अधिक मात्राले तौल नियन्त्रण
४. आँखालाई स्वस्थ राख्ने एन्टिअक्सिडेन्ट
एभोकाडोमा लीउटीन र जीआछानथीन नामक तत्वहरु पाइन्छन्, यी रसायनले आँखाका कोषिकालाई नष्ट हुनबाट बचाउँछन् र अल्टाभाइलेट प्रकाश प्रदान गर्छन् । जसले आँखालाई स्वस्थ राख्न ठूलो भूमिका खेल्छ । वृद्धहरुको आँखामा आउने समस्यालाई पनि यसले कम गराउने भएकाले नियमित एभोकाडोको सेवन गर्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् ।
५. क्यान्सरबाट बचाउँछ
एउटा अनुसन्धानका अनुसार एभोकाडो नियमित खाँदा यसले क्यान्सरको उपचार गर्दा गरिने केमो थेरापीको साइड इफेक्टलाई न्युन गराउन मद्दत गर्छ । पर्याप्त मात्रामा यो फलको प्रयोगले आन्द्रा, पेट, प्याङ्क्रियाज र पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ भन्ने दाबी गरिएको छ ।
अनुसन्धानकर्ता कुरामा विश्वास गर्छन् कि यसमा रहेको ‘फोलेट’ तत्वले अनावश्यक सेल बढ्न दिंदैन। क्यान्सर लाग्न नदिन र क्यान्सर लागिसकेपछि पनि उपचारमा यो फल सहयोगी मानिन्छ। केही अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यसमा रहेको फिटोकेमिकलले बढ्न लागेका क्यान्सरका कोषलाई रोक्छ । प्रोस्टेट क्यान्सरबाट बचाउने हुनाले पुरुषहरुले दैनिक एभोकाडो खाने गर्नुपर्छ ।
६. तौल घटाउन प्रभावकारी
७. घुँडा दुख्ने रोगबाट बचाउँछ
८. गर्भपतन रोक्छ
९. डिप्रेसनको जोखिम कम गर्छ
यो फलमा उच्च मात्रामा रहेको फोलेट तत्वले डिपे्रसन हुनबाट बचाउन सक्छ। किनकि फोलेटले होमोसिस्टाइन उत्पादन गरी मस्तिष्कमा पठाउँछ। यसले मस्तिष्कमा हुने सेरोटोनिनी, डोपामिन र नोरेनिफाइन प्रभावित गर्छ। जसले थकान, निद्रा र मुडलाई नियन्त्रणमा राख्छ ।
१०. पाचन प्रक्रियामा सहयोगी
एभोकार्डोमा पर्याप्त मात्रामा फाइवर, क्रिमजस्ता तत्व पाइन्छन् । फाइवरयुक्त खानाले कब्जियत हुन दिँदैन र पाचनप्रणाली चुस्त बनाउँछ। पाचन प्रणाली राम्रो हुँदा आन्द्राको क्यान्सर हुने जोखिम कम हुन्छ ।
११. शरीरबाट विकार हटाउँछ
१२. गठियाबाथको उपचार
यसमा पाइने ‘स्याप्नोनिन्स’ ले गठियाबाथको उपचारको काम गर्छ। यसको नियमित सेवनले गठियाबाथको कारण हुने दुखाइ पनि कम गर्छ ।
← पुरुषलाई कस्ता नारी मनपर्छ ?
बाँसको तामा खानुका फाइदाहरु →
3 thoughts on “एभोकाडो खानुका फाइदाहरु”
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् सरिफा खानुका फाइदाहरु
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् फर्सीको बियाँका फाइदाहरु